Pioneershares စျေး - အွန်လိုင်း PIO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pioneershares (PIO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pioneershares (PIO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pioneershares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
PIO – Pioneershares
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pioneershares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pioneershares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PioneersharesPIO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0972PioneersharesPIO သို့ ယူရိုEUR€0.0825PioneersharesPIO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0745PioneersharesPIO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0887PioneersharesPIO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.879PioneersharesPIO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.614PioneersharesPIO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.17PioneersharesPIO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.364PioneersharesPIO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.13PioneersharesPIO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.136PioneersharesPIO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.18PioneersharesPIO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.753PioneersharesPIO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.528PioneersharesPIO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.29PioneersharesPIO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.32PioneersharesPIO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.133PioneersharesPIO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.147PioneersharesPIO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.03PioneersharesPIO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.677PioneersharesPIO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.29PioneersharesPIO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩115.57PioneersharesPIO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦36.78PioneersharesPIO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.16PioneersharesPIO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.69
PioneersharesPIO သို့ BitcoinBTC0.000008 PioneersharesPIO သို့ EthereumETH0.000255 PioneersharesPIO သို့ LitecoinLTC0.00169 PioneersharesPIO သို့ DigitalCashDASH0.001 PioneersharesPIO သို့ MoneroXMR0.00103 PioneersharesPIO သို့ NxtNXT7.02 PioneersharesPIO သို့ Ethereum ClassicETC0.0138 PioneersharesPIO သို့ DogecoinDOGE27.84 PioneersharesPIO သို့ ZCashZEC0.00103 PioneersharesPIO သို့ BitsharesBTS3.8 PioneersharesPIO သို့ DigiByteDGB3.56 PioneersharesPIO သို့ RippleXRP0.329 PioneersharesPIO သို့ BitcoinDarkBTCD0.00332 PioneersharesPIO သို့ PeerCoinPPC0.333 PioneersharesPIO သို့ CraigsCoinCRAIG43.96 PioneersharesPIO သို့ BitstakeXBS4.11 PioneersharesPIO သို့ PayCoinXPY1.68 PioneersharesPIO သို့ ProsperCoinPRC12.1 PioneersharesPIO သို့ YbCoinYBC0.00005 PioneersharesPIO သို့ DarkKushDANK30.93 PioneersharesPIO သို့ GiveCoinGIVE208.8 PioneersharesPIO သို့ KoboCoinKOBO22.4 PioneersharesPIO သို့ DarkTokenDT0.0895 PioneersharesPIO သို့ CETUS CoinCETI278.38
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 22:20:02 +0000.